Fialana andraikitra | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Andraikitra amin'ny votoatiny
Amin'ny maha mpanome serivisy antsika, tompon'andraikitra amin'ny atiny manokana ireo tranonkala ireo izahay araka ny voalazan'i Sec. 7, fehintsoratra 1 ny lalàna Telemedia Aleman (TMG). Na izany aza, hoy i Sec. 8 hatramin'ny 10 Alemà Telemedia Act (TMG), ny mpamatsy serivisy dia tsy adidy ny hanara-maso tsy tapaka ny antontan-taratasy natolotra na notehirizina na hitady ireo porofo manondro hetsika tsy ara-dalàna.
Ny adidy ara-dalàna amin'ny fanesorana ny fampahalalana na ny fanakanana ny fampiasana ny fampahalalana dia tsy mihetsika. Amin'ity tranga ity dia ny fananana andraikitra dia azo atao amin'ny fotoana fahalalana fotsiny mikasika ny fanitsakitsahana lalàna voafaritra. Esorina avy hatrany ny votoaty tsy ara-dalàna amin'ny fotoana ahazoantsika fahalalana azy ireo.
Adidy amin'ny rohy
Ny tolotra omena dia misy rohy mankany amin'ireo tranokalan'ny antoko fahatelo. Tsy manan-kery amin'ireo votoatin'ny tranonkala ireo izahay, noho izany dia tsy afaka manome antoka isika amin'ireo zavatra ireo. Ny mpamatsy tranonkala na ny mpitantana tranonkala mifandray dia tompon'andraikitra foana amin'ny atiny manokana.
Ireo tranonkala mifandraika mifandraika dia nohamarinina momba ny mety fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny fotoana nananganana ny rohy. Tsy hita ny votoaty tsy ara-dalàna tamin'ny fotoana nampifandraisana. Ny fanaraha-maso maharitra ny votoatin'ny tranonkala mifandray dia tsy azo apetraka raha tsy misy fanamarihana mazava fa nisy ny fandikana ny lalàna. Ny rohy tsy ara-dalàna dia esorina avy hatrany amin'ny fotoana ahazoantsika fahalalana azy ireo.
Ny votoatiny sy ny fanontana navoaka tao amin'ireo tranonkala ireo nomen'ny mpamatsy dia iharan'ny lalànan'ny zon'ny mpamorona Alemanina. Ny famerenana, ny fanitsiana, ny fizarana ary koa ny fampiasana ireo karazana ivelan'ny sakelin'ny lalànan'ny zon'ny mpamorona dia mitaky fahazoan-dàlana an-tsoratra an'ny mpanoratra na mpamorona. Ireo rindranasa sy dika mitovy amin'ireo tranonkala ireo dia avela ampiasaina irery.
Ny fampiasana ara-barotra amin'ny votoatintsika raha tsy mahazo alalana avy amin'ilay namorona dia voarara.
Ny lalànan'ny zon'ny mpamorona dia hajaina raha toa ka tsy avy amin'ny mpamatsy ny atiny amin'ireo tranonkala ireo. Ny fanomezana ny ankolafy fahatelo amin'ity tranonkala ity dia aseho toy izany. Na izany aza, raha tsikaritray ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny zon'ny mpamorona, azafady mba lazao anay. Hesorina avy hatrany ny atiny toy izany.
Fahazoan-dàlana amin'ny haino aman-jery